တရုတ်ပလတ်စတစ်တံမြက်စည်းချည်မျှင် extruding စက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
ပလတ်စတစ်တံမြက်စည်း ချည်မျှင်ထုတ်ခြင်းစက်ကို စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြို့ပြအသုံးပြုရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်းများပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် PET၊ PP၊ PE monofilament ထုတ်လုပ်ရန် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်းချည်မျှင် extruding စက်ကို ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်း ဖိုက်ဘာလုပ်စက်၊ ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်း အမွေးအမှင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စသည်တို့ကို ခေါ်သည်။ အဆိုပါ တံမြက်စည်းချည်မျှင်စက်လိုင်းကို အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး အဖြောင့်နှင့် ဇစ်ဇတ်တုံးများ ထုတ်လုပ်ရန် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး အမျိုးမျိုးသော အိမ်ကြမ်းပြင် တံမြက်စည်းများကို ပြုလုပ်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ လမ်းသန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်းများ၊ ဥယျာဉ်သန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်းများ။ ချည်မျှင်များသည် လိုအပ်ချက်များအရ အလံပြနိုင်သည် သို့မဟုတ် အလံမလှဲနိုင်ပါ။
monofilament ၏ ကုန်ကြမ်းများသည် များသောအားဖြင့် PET၊ PP နှင့် PE တို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုကြသည်။
ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်းချည်မျှင် extruding စက်လိုင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောကုန်ကြမ်းများနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်များအလိုက် မတူညီသော မော်ဒယ်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ပင်မမော်တာ 22kw 22/30kw 30/37kw
စွမ်းရည် (kgs/h) 80-100 ကီလိုဂရမ် 100-125 ကီလိုဂရမ် 125-140 ကီလိုဂရမ်
1. ကုန်ကြမ်းကို အမျှင်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. စက်လိုင်းဒီဇိုင်းအတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ။
3. ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။
5. ဤနယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်း၏ ထိပ်တန်းအနေအထား
အိမ်ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်း၊ သန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်း၊ လမ်းသန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်း၊ ဥယျာဉ်သန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်း၊ တံမြက်စည်းမျိုးစုံ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
>> ပလပ်စတစ် တံမြက်စည်းချည်မျှင် extruding စက်
ယခင်- ပလပ်စတစ်ဖြီးအမျှင် extruding စက်
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် တရုတ် Monofilament Extrusion စက်/ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် တံမြက်စည်း ချည်မျှင်ကြိုး ဝါယာ ဘရိတ်လုပ်စက်